Sawirro:-Askar Maraykan oo dil iyo dhaawac kala kulmay Dagaal ay Al-Shabaab kula galeen Jubbooyinka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Sawirro:-Askar Maraykan oo dil iyo dhaawac kala kulmay Dagaal ay Al-Shabaab kula galeen Jubbooyinka
On Jun 9, 2018 Last updated Jun 9, 2018
Hadal ka soo baxay Waaxda Difaaca Maraykanka ee The Pentaagon-ka ayaa lagu sheegay in Hal Askari oo Mraaykan ah la dilay, 4 kalena lagu dhaawacay Weerar Jid-gal ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan Jubbaland, oo qiyaas ahaan meel 220 mayl dhanka K/Galbeed kaga toosan magaalladda Muqdisho.
Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa iyagana xaqiijiyey Dhacdadaasi, waxayna sheegeen in Ciiddankaasi qeyb ka ahaayeen Ciiddan ballaaran oo tiradoodu dhamayd 800 Askari oo isugu jirtay Somali, Kenyan iyo Maraykan, kuwaasi oo ka qeyb galayey Hawlgal ka dhan Dagaalamayaasha Alshabaab.
AFRICOM waxay sheegeen in Ciiddanka Huwanta ay Alshabaab kala kulmeen Weerar Hoobiyayaal iyo hub fudud abaarihii 02:45 daqiiqo ee duhurnimadii shalay oo Jimco ahayd, taasina ay sababtay dhimashadda Hal Askari oo Mraaykan ah, dhaawaca 4 kale iyo Askari ka tirsanaa Ciiddanka Somalia.
Qoraalka laguma sheegin inay Ciiddanka Maraykanka qeyb ka ahaayeen Ciiddanka Soomaalida ama kuwa Kenya ee qeybta ka ahaa Hawlgalkaasi.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inay niyadiisa la jirto qoysaska Askari la dilay iyo kuwa lagu dhaawacay Somalia.
Waxa uu Askartaasi ku sheegay inay xaqiiqdii yihiin dhamaantodoa Geesiyaal, waa sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba ha ahaatee, Askariga Maraykanka ee shalay lagu dilay duleedka Kismaayo ayaa ah kii 2-aad ee lagu dilo Somalia, tan iyo markii la doortay Madaxweyne Trump, waxaana Askarigii 1-aad lagu dilay Gobalka Sh/hoose bishii May ee sannadkii hore.
Ku-dhawaad 500 Askar Maraykan ayaa ku sugan Somalia, kuwaasi oo ay ku jiraan Ciiddanka Khaaska iyo kuwa Badda, kuwaasi oo la sheegay inay leetyihiin Tababar aad u sarreeya.
Sawirro:-Ra’iisul Wasaare Abiyi Axmed oo booqasho uga bilaabatay dalka Uganda